के फेरि होला लकडाउन ? डाक्टरहरुले दिए यस्तो सुझाव ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
कोरोना भा’इरस सं’क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न लकडाउन गरिएको एक वर्ष पूरा भएको छ। सरकारले ठीक एक वर्षअघि चैत ११ देखि एक साताका लागि लकडाउन गरेको थियो। तर, त्यसको अवधि थपिँदै लगिएको थियो। छिमेकी मुलुक भारतमा फेरि कोरोना सं’क्रमण बढ्न थालेसँगै नेपालमा त्रा’स बढेको छ। धेरैले प्रश्न गर्न थालेका छन्, ‘नेपालमा के होला ?’